FBA Inodzosera Zvinhu kuChina, Warehousing Service muChina - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
YiXing Global Zvigadzirwa Co Ltd. ine anopfuura zviuru zvina mazana mana emamirimita emba yekuchengetera, zuva rega rega anopfuura odhira zviuru zana zvezvigadzirwa mudura, mwedzi unodarika mazana matatu ezviuru mirairo yezvinhu, pamusoro apa ingori kona diki yemifananidzo yekuchengetera. Tinogona kupa vatengi nekuchengetera nekuchengetedza zvinhu muChina, kudzorera zvinhu kudzokera kuChina nekumwe mabasa.
Ko vatengesi veAmazon vanoziva nei zvigadzirwa zvavo zvichizodzoserwa nekushandurwa zvinyorwa, uye maitiro ekubata neFBA akadzoreredzwa
Zvikonzero zvevatengesi veAmazon FBA vanodzosa zvinhu kuti vachinje zvinyorwa:
1. Zvichemo zveVatengi uye ongororo dzakaipa zvinoita kuti account ivharwe zvachose.
2. Kunyora odhita hakuna kukodzera.
3. Midziyo inobatanidzwa mukuteedzera mhando, kukanganisa, zvichikonzera kuti account ivharwe.
4. Iko kurongedza kwechigadzirwa kwakakuvara uye hakugone kuiswa muFBA sechigadzirwa chitsva.
5. Kana iyo account yakavharwa kana kunyunyuta, chinja iyo account nyowani yekutengesa.
6. Iyo yekutengesa vhoriyamu yeakaunzi A haina kunaka, saka tinoda kutsiva iyo yemhando yepamusoro account B yekutengesa.
7. Mushure mekusvitswa mudzimba, iko kukanganisa kwekodhi hakugone kutengeswa, kunofanirwa kuvezve kwakavezwa.
Nzira chaiyo yekutarisana neFBA inodzoka yakakamurwa kuita maviri mamiriro:
Rudzi rwekutanga: Mutengi agamuchira izvo zvinhu:
Nezve dambudziko rekudzoka rakakonzerwa neiyo FBA kuraira, izvo zvinhu zvinodzoserwa kuFBA imba yekuchengetera uye FBA inozvibata.Mutengesi anogona kubata FBA kuti atore zvinhu zvidzokere kuimba yekuchengetera, uye kudzoserwa kunogadziriswa mushure me mutengi anodzorera zvinhu.
2. Kana zvinhu zvadzorerwa zvisina kukuvara, unogona kutaura neAmazon kuti unyore zvakare kuti vatengesere. Kana akakuvara, Amazon inokuyeuchidza kuti chigadzirwa hachichakwanisike kutengeswa.
Unogona kukumbira Amazon kuti iparadze, kana kukumbira wechitatu-bato mhiri kwemakungwa imba yekuchengetera kuti idzokere kuChina, kana kubvunza yechitatu-bato mhiri kwemakungwa imba yekuchengetera iyo inogona kupa kugadzirisa uye kudzosera sevhisi kuti ikubate iwe.
Rudzi rwechipiri: mutengi haasati agamuchira zvinhu:
1.Kana zvinhu zvako zviri kumberi zvisina kuburitswa zviri pamutemo, zvinogona kudzora kucheka, kumutengi kuti agadzirise mari zvizere.
2. Kana iwe wakatumira zvinhu zvakatemwa kuti zvirege kudzoka, izvo zvinoratidza kuti unotaurirana nemutengi, akadaro zvinhu zvatumirwa izvozvi, mushure mekumirira kuti mutengi agamuchire zvinhu, ona sekusade kusarudza zvakare hakusi kuita zvinhu zvacho.
3. Kana mutengi achiri asingabvumire, ava kuzobata nenhumbi, anogona kufunga nezve yavo mutengo mutengo wekutaurirana nemutengi kungodzorera chikamu chemari, izvo zvinhu zvinopihwa kumutengi mahara, kuitira kuti udzikise Kana iwe ukasangana nedambudziko rekudzoka kweFBA, iwe unofanirwa kuzorodza pfungwa dzako uye edza nepaunogona napo kutsvaga nzira yekudzora kurasikirwa kwako uye kunyatso kufadza manzwiro evatengesi.